Etu esi agwakọta igwe ahia gi | Martech Zone
Enwere m obi ụtọ ihe ọmụma a site na JBH na akụkọ na ihe osise ọ na-ewepụta ka ị na-eche banyere ọdịnaya. 77% nke ndị ahịa ugbu a na-eji ahịa ọdịnaya na 69% nke ụdị mepụta ọdịnaya karịa ka ha mere otu afọ gara aga. Dịkwa ka onye ọ bụla nwere uto maka mmanya mmanya kachasị amasị ha, ọ dị mkpa icheta na ndị na-ege gị ntị dịgasị iche - ọtụtụ na-enwe ụfọdụ ọdịnaya maka ndị ọzọ.
Iji nyere gị aka melite mbọ ị na-agba ịre ahịa JBH Mixology nke ọdịnaya ahịa infographic - ijere ndụmọdụ banyere otu esi emepụta ma nyefee ọdịnaya kachasị na ụfọdụ usoro ahụike sitere na Hubspot na SmartInsights tụbara maka ezigbo ihe!
Onwe m, m ga-etinye coaster na ihe ọ drinkụ toụ ọ bụla na ọ dị mma kpọọ ka eme. Ọdịnaya na-eme nke ọma karịa maka azụmaahịa gị ma ọ bụrụ na ị nye ụzọ iji tinye aka na ntughari yana ihe ọ drinkụ drinkụ!
[igbe ụdị = ”download” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ””] gnighọta ọdịnaya ọ bụla dị ka njikọta nke akụkụ ya bụ ọtụtụ echiche na atụmatụ dị n’azụ akwụkwọ eBook anyị bipụtara na Meltwater, Etu ị ga - esi depụta ọdịnaya gị gaa njem ndị ahịa na - atụghị anya ya. [/ igbe]
Naanị buru n'uche na ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwee mmasị na mmanya ha dị iche na nke ọzọ. Abụ m onye na-agba agba nke bourbon na Coke mara mma, mana m dị ntakịrị, yabụ enwere ọtụtụ Coke karịa ọtụtụ bourbon aficionados nwere ekele. Megharị otu ihe ọ drinkụ drinkụ otu oge na-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ọ bụ otu onye ọbịa ahụ ị na-edozi ahụmịhe ahụ ugboro ugboro.
Dị ka oge niile, ana m akwado ịme nyocha iji chọta ihe ọ drinkụ drinkụ zuru oke. A bit ọzọ eziokwu otu oge, a dechara were bụrụ na nke na-esote, a nta ole na ole ahịa… niile nwere ike ịbụ iche iche ị chọrọ iji na-adọta ọbụna ihe ndị mmadụ na-ekere òkè na gị ika.
Tags: Blọọgụcontent Marketingụdị ọdịnayainfonet ahịa infographicụlọ ọrụ ozi ọmainfographicjbhogologo oru nta akuko-Dị OgologoInfographics Ahịangwakọtaelekọta mmadụ videoonye ọrụ mepụtara ọdịnayamalitere ịrịaakwụkwọ ọchawhitepapers